I-Claudia 's Cow Ladies Cottage - I-Airbnb
I-Claudia 's Cow Ladies Cottage
278 okushiwo abanye
Hot Springs, South Dakota, i-United States
U-Claudia Ungumbungazi ovelele
Indlu eyakhiwe ngo-1920, egcwele ifenisha enhle ye-Gramma nezinkumbulo zezintombazane zenkomo. Isedolobheni elincane elithulile elingumakhelwane nezakhiwo ezintathu ukusuka Endaweni edumile ye-Mammoth, uhambo lwemizuzu eyishumi ukusuka e-Hot Springs engokomlando yedolobha ne-Evans Plunge Natural Hot Springs nezindawo zokudlela zendawo. Kulula kakhulu ukusebenzisa i-Wind Cave National Park, i-Angostura State Park ne-Lake, i-Custer State Park, i-Wild Horse Sanctuary nazo zonke izindawo ezithandwayo ze-Black Hills.
Isivakashi sinokusetshenziswa okugcwele kwekamelo lami eliyinhloko elinezinyawo ezingu-610 sq. Indlu yami isendaweni enokuthula enemigwaqo ebanzi. Ilungele ukuhamba ngezinyawo nokuhamba ngebhayisikili. Ngizohlinzeka ngesinkwa esisha. Nginikeza ubhontshisi wekhofi omusha, ikhofi, kanye ne-french press. Wamukelekile kunoma yimaphi ama-condiments noma noma yini ongayithola ku-frig yami! Izitsha zokupheka, izitsha njll. ziyatholakala.
I-TV engu- 36" ene-I-Amazon Prime Video, I-Roku
4.95 out of 5 stars from 278 reviews
4.95 · 278 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-278
Indawo engumakhelwane nendlu yami iseduze namapaki edolobha, uhambo olusheshayo oluya edolobheni elinomlando onezakhiwo zesihlabathi ezibhalwe kuRejista Yomlando, kanye ne-Freedom Trail enhle elandela umfula omuhle wasekwindla.
Ngizotholakala futhi ngizimisele ukwabelana nawe ngokokuzithokozisa kwami kwasendaweni. Zizwe ukhululekile ukubuza noma nini. Ubumfihlo buhlonishwa ngokuphelele, futhi. Ngithanda izindaba ezijabulisayo ezabelwana ngazo emgodini womlilo kodwa ngithanda isikhathi sokuzikhipha ngedwa!
Ngizotholakala futhi ngizimisele ukwabelana nawe ngokokuzithokozisa kwami kwasendaweni. Zizwe ukhululekile ukubuza noma nini. Ubumfihlo buhlonishwa ngokuphelele, futhi. Ngithanda…